Umkhonto usudla ekhaya eSaudi Arabia - Bayede News
Emveni kwezinyanga kube nokwehla kokujolozela ngalokho okwenzeka eSaudi Arabia, nalokho okwenziwa yiNkosana yakhona, uMohammed bin Salman (MBS), abantu sebephakamise izinkophe ngenxa yezehlakalao zakamuva. Okunye okwenzekile kube wudaba lokuboshwa kwabathile nokukholakala ukuthi kuhlobene nezinhlelo zikaMBS zokuqinisa isandla kulabo abaphikisana naye ngaphakathi ezweni nasemndenini. Lokhu abahlaziyi nalabo abaphikisana nokuboshwa bathi yingxenye yomkhankaso wokuqinisekisa ukuthi uthatha esoBukhosi engaphazanyiswa muntu.
Phakathi kwalabo ababoshwe ngamaphoyisa agasele ezifihle ubuso bekuyiNkosana u-Ahmend Abdulaziz ongumnewabo weNkosi uSalman, iNkosana uMohammed bin Nayef okwake kwabhekwa kuye ukuthi angahle athathe esoBukhosi kanye neNkosana uNawaf bin Nayef bonke okuthiwa bayingxenye yetulo lokuketula umbuso. Kwenzeka konke nje lokhu kukhona ukuwumuzela kwabathile eSaudi Arabia ngalokho abakuhumusha njengokwehluleka kukaMBS ukuqinisekisa ubuqhude beSaudi Arabia kupolitiki yesifunda. Lapha babala ukuqeda ukubhekana kweziqu zamehlo neQatar nokwabe kulindeleke ukuba kube yinto elula. Lapha iQatar yavusa umhlwenga ezindabeni ezithinta iGulf Cooperation Council (GCC), nokwabe kuhlale kukhonya izwi leSaudi Arabia.
Okunye abakwabo abamsola ngakho wukwanda kwamandla e-Iran esifundeni nokuyinto abathi ingahle ibeke izwe engcupheni yokuhlaselwa. Konke lokhu kwenzeka nje udaba lwempi yaseYemen nesidale izintandane lapho iSaudi Arabia ibukeka njengomhlaseli kanye nokubulawa kwentatheli uJamal Khashoggi nowayephikisana nokuzibandakanya kweSaudi Arabia kule mpi nokukhonjwa uMBS njengomuntu owakhipha igama lokuthi akasocongwe. Kongoti nalabo abalandela ipolitiki yaleliya lizwe, ukuboshwa kwabathathu kuqhubeka into eqale ngowezi-2015 ngesikhathi iNkosi uSalman ithatha isihlalo. Nothi angenza njalo waqoka uMBS njengoNgqongqoshe Wezempi.
Akuphelanga zinyanga zingaki wayiphaka eYemen ngaphandle kokubonisana nezingwevu. Okusobala lapha wukuthi lokhu kuseyisiqalo okukhulu kuyeza ngoba phela uMBS ucabanga ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi kugide yena futhi ukwesekwa yi-United States of America kumenza abe nezimpiko.
Anathi Mtaka Mar 13, 2020